Nhau - Iyo denda rekudzivirira uye kudzora basa harigone kuzorodzwa kwechinguva！
Kuvandudzwa kwedenda iri kwakanangana nenjodzi ye "zvitatu zvakarukwa uye zvakaiswa pamusoro"
Kubva kutanga kwechando, kukura kwehosha kwakatarisana nenjodzi ye "matatu akabatanidzwa uye akaiswa pamusoro", mamiriro ekudzivirira uye ekudzivirira ave akaomarara uye akaomarara, uye mabasa acho anonetsa uye anonetsa.
Denda repasi rose rinopa njodzi dze "shanduko zvishoma nezvishoma" uye "shanduko". Iyo yakasikwa nharaunda munguva yechando yave yechisikigo inotonhora cheni. Iyo nyowani coronavirus ine yakareba kupona nguva, yakasimba hutachiona chiitiko, uye yakakura mikana yekutapurirana. Uye zvakare, shanduko yehutachiona yawedzera hutachiona uye kuvanda, zvichikonzera kuputika kwakazara kwehutatu hwehutachiona pasi rese. Kubva Zvita 2020, kwave nematanho anodarika mazana matanhatu ezviuru akasimbiswa pasi rese, uye vanopfuura zviuru gumi vakafa, ese ari maviri matsva kubva pakatanga.
Chirwere chemumba chinopa njodzi yekupindirana uye kuwanda kwezvipenga uye munzvimbo dzakabatana. Kubva Zvita 2020, matunhu makumi maviri akamhan'ara nyowani dzakatorwa dzakasimbiswa zviitiko uye zviratidzo zvekuratidzira. Kubva na24: 00 muna Ndira 7, 2021, nyika yangu ichangobva kusimbisa mazana maviri nemakumi masere emakesi emunharaunda, ayo zana nemakumi mashanu nemapfumbamwe aive achangowedzerwa muvhiki rapfuura. Mhosva, kunyanya kuputika kwechangobva kuitika muShijiazhuang Guta, Ruwa rweHebei. Kubuda kwezviitiko izvi kunoyeuchidza dunhu redu nezvechirwere chekudzivirira uye kudzora basa uye hakugone kuzorora.
Iyo denda rekudzivirira uye kutonga mamiriro inopa njodzi dzekupindirana kwevanhu, zvigadzirwa uye mota. Dunhu redu idunhu rine huwandu hwakawanda hwevanhu vanobuda. Huwandu hwevashandi vanoenda kune dzimwe nyika uye vadzidzi vekoreji vari pakati pevashanu vepamusoro munyika, uye vazhinji vacho vanoyerera vachienda kuChangzhumin yakavakidzana nedzimwe dziviriro huru dzekudzivirira uye kudzora madoko. Mutambo weChirimo uri kusvika, uye vadzidzi vachave nemazororo nevatorwa. Nekudzoka kwevanhu vebhizimusi, uye mwaka wepamusoro wekufamba kwevanhu vachiuya kubva kune dzimwe nzvimbo muJiangxi, njodzi dzakasiyana uye zvisina chokwadi zvinhu sekufamba kwevanhu, kuungana uye nzendo zvakabatana uye zvakakurisa, izvo zvinogona kutungamira nyore nyore pakupararira kwe hutachiona uye kunyange masumbu ezvirwere.
Pedzisa kubaya vanhu vakakosha pamberi peMutambo weChirimo
Nguva yechando nechirimo inguva yakaoma yekudzivirira nekudzivirira. Dunhu redu rinoshandisa zviyero zvakasiyana "zvekunze zvekudzivirira zvekunze, zvekudzivirira zvemukati", uye zvine hungwaru, sekutanga kwaro, kubata zvakajairika uye chaiyo denda rekudzivirira nekudzivirira, uye rinoramba richisimbisa denda rakakundikana Dziviriro uye kudzora mhedzisiro.
Nekuchenjera tumira kudzivirira uye kutonga kwechando uye chitubu madenda. Kubva kutanga kwechando, purovhinzi yedu yakaita misangano yakati wandei yekudzidza nekudzivirira kudzivirira uye kudzora kwezvirwere zvechando uye zvechirimo, kurongedza nekugadzirisa nyaya hombe, nekusimudzira nzvimbo dzemirairo yedunhu kumatunhu ese kuti vakurumidze kupinda munguva yehondo. Kubva Zvita 2020, dunhu redu rakaburitsa zvakateerana zvirongwa makumi matatu zvine chekuita nekudzivirira uye kudzora denda, kubaya majekiseni, kuyedza nucleic acid uye kuvaka kiriniki yekiriniki, zvivakwa zvekurapa, zvibhorani zvekukurumidzira, nekusimbisa denda rekudzivirira uye kutonga mukati meZuva reGore Idzva. uye Mutambo weChirimo. Iro zano ndere kushingairira uye kutsiga kurwisa kudzivirira uye kutonga munguva yechando uye chitubu. Munguva yeZuva reGore Idzva, purovhinzi yedu yakatumira zvikwata zvevatariri gumi nematanhatu kumatunhu akasiyana-siyana epurovhinzi kuti dziite kushanya kwakavhurika uye kusingaziviswe kuti vabvise zvakasimba njodzi dzakasiyana dzakavanzika dzekudzivirira nekudzivirira kwehosha.
Zvichienderana neState Council yakabatana yekudzivirira uye kudzora mashandiro pane kubatanidzwa kweiyo nyowani coronavirus kubaiwa kwevanhu vanokosha, dunhu redu rakagadzira zvirongwa zvebasa kana zvirongwa zvekubaiwa, zvisina kujairika maitiro ekuongorora, kurapwa, uye muripo wezve zvakanyanya kukanganisika maitiro, kujekesa mapoka maviri Tarisa pane vanhu vakabayiwa nhomba. Chikamu chekutanga vanhu vari panjodzi yakanyanya yehutachiona nyowani pneumonia hutachiona, kusanganisira vanhu vane njodzi dzakanyanya dzekuratidzira pabasa, senge chiteshi chemberi-mutsika kuongorora uye kuvharira vashandi vanoita zvekunze kutonhora zvinhu cheni, kurodha chiteshi uye kuburutsa, kubata, kutakura uye zvimwe vashandi vane hukama, vekunze uye vezvekufambisa vekunze Vashandi, vashandi vepamuganhu, vashandi vekurapa uye vehutano vanotarisana nenjodzi yakakwira yehosha dzekunze kwenyika; vanhu vari panjodzi yekutapukirwa kunze kwenyika, sevaya vanoenda kunze kwenyika kunoshanda kana kudzidza zvebhizinesi kana zvakavanzika zvinangwa. Chikamu chechipiri ndechevashandi vane zvigaro zvakakosha zvinovimbisa mashandiro enzanga, kusanganisira veruzhinji magariro evashandi, senge kuchengetedzeka kweruzhinji, kudzimisa moto, vashandi vemunharaunda, uye vashandi vane hukama mumasangano ehurumende nemasangano anopa rubatsiro kuvanhu. avo vanochengetedza zvakajairika kugadzirwa nekugara mashandiro enharaunda Vashandi, senge mvura, magetsi, kudziyisa, marasha, vashandi vane hukama negasi, nezvimwe. vashandi vehukama hwevashandi vehukama, senge chekufambisa, zvigadzirwa, kuchengetedzwa kwevakwegura, hutsanana, mariro, nevashandi vane hukama. Dunhu iri rine ongororo yakadzama yehuwandu hwevanhu vanoda kubayiwa muhurongwa uhu hwevanhu vangangosvika miriyoni imwe nesere. Iri denderedzwa rebasa rekudzivirira mupurovhinzi rakaparurwa zviri pamutemo musi waZvita 28, 2020. Parizvino, vanhu vanosvika 381,400 vakabayiwa. Kubayiwa kwevanhu vakakosha kunozadziswa pamberi peMutambo weChirimo.
6 matunhu epakati-chikamu nucleic acid yekutsvaga emergency emergency zvikwata zvakaumbwa
Mazuva ano, kune makiriniki mazana maviri nemakumi matatu nematatu efivha akapasa kuongororwa mudunhu, uye chiyero chekupedzisa kuvaka chiri 99.5%. Pakati pavo, mwero wekugamuchirwa wemakiriniki efivhiri muzvikoro zvepamusoro zvepamusoro uye zvipatara zvezvirwere zvinotapukira i100%. Yepurovhinzi yemazuva ese yenicic yekuyedza vhoriyamu yakawedzera kusvika pa338,000, uye matanhatu ematunhu-chikamu nucleic acid kuyedza emergency mafoni zvikwata uye 1 timu yekudzora mhando yakaumbwa.
Pamusoro pezvo, dunhu redu richaedza zvese kuita basa rakanaka mukuteedzera uye kuyedza iyo nyowani coronavirus nucleic acid yezvinhu zvekunze zvinotonhora zvekudya, kuti batch yega yega uye chidimbu chega chega chiongororwe. Ramba uchiita chiitiko chakakosha uye chinoshanda chakawanikwa mudanho rekutanga, ramba uchivandudza maitiro akajairwa, ramba uchisimbisa "nharaunda yemunhu" nekudzivirira, ramba uchisimbisa kudzivirira kweboka uye kutonga kweboka, ramba uchibatanidza hwaro hwekudzivirira nekutonga, uye ita nhamburiko dzese kudzivirira uye kudzora denda rechando nechirimo.